SingForYou.net - Mi Tot Mi Tal
Tags : နာမည်လား.... ဗလ လေ....ခဏ ခဏ မမေးနဲ့....ရှက်လို့မဟုတ်ဘူး အာညောင်းလို့.....ဟိဟိ...
By : myobala on Dec 22, 2009
Score: 62 Rating: 4.77 Comments: 26
Mi Tot Mi Tal's Description
နာမည်လား.... ဗလ လေ....ခဏ ခဏ မမေးနဲ့....ရှက်လို့မဟုတ်ဘူး အာညောင်းလို့.....ဟိဟိ...
koaungkhaing on Dec 25, 2009 0
ညီလေးမျိုးဗလ ဘာဆိုဆိုကောင်းတာပါပဲလား..... မာမာအေးသီချင်းတပုဒ်လောက်ဆိုပြပါလား
myobala on Dec 26, 2009 0
ဟာ ဂျာ ... အကိုကြီး ကလည်း ဒေါ်မာမာအေး သီချင်းက မရှိဘူးဗျ......ရှိရင်တော့ကျွန်တော်က စမ်းဆိုပြီးတာ ကြာပေါ့......ဟိဟိ....ကျေးဇူးပါနော်အကိုကြီး အားပေးသွားတာ......
panshwe on Dec 22, 2009 0
ဟားဟား .. တကယ်အသည်းလှုပ်ရှားတာလား .. ယုံပါဘူး .. ဒါတော့ rap ပါသွားပြီပေါ့ . :D *******************
myobala on Dec 22, 2009 0
ယုံလိုက်ပါ မပန်းရွှေလေးရ......ဟိဟိ ..အားလုံးကတောင်းဆိုလို့ပြန်ဆိုပေးတာလေ.....ဒါပေမယ့်တော့ တွေ့သမျှခိုက် မကြိုက်တတ်ဘူးကွယ်.........ဟားဟားဟား...
greenlay on Dec 22, 2009 0
ကိုမျိုးကြီးရေ ... စတိုင်တစ်မျိုးနဲ့ ဆိုထားတာ ကောင်းတယ်၊ မိတော့ မိတယ်လား ... ဘယ်သူလေးတုန်း ပြောပြအုံးလေ တိချင်လို့ :P ၊
၀ိုး.....ချစ်မကြီး ဓါတ်ပုံတွေက တနေ့တမျိုးမရိုးရပါလားဗျ....အခုမှသေချာကြည့်မိတယ်..ချစ်အကိုကြီးကဒေါင်မြင့်မြင့်နဲ့တော်တော်မိုက်တာပဲ.....ဟိဟိဟိဟိ....အခုမှကွဲသွားတယ်ဗျ....သူကလေးက *** ဖြစ်နေတာသေချာသွားပြီ.....ကြိုက်တော့ဘူး....ဟိဟိ....
uncleyar on Dec 22, 2009 0
ကောင်းတယ်ဝေ့သီချင်းမျိုးဆုံ ဆိုနိုင်တာပဲအကိုက.. အားပေးနေတယ်ဗျို့ ..။စတားပါပေးသွားပီ..။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝေ့......အမှတ်တရ နေ့လေးမှာ ပျော်လိုက်ရလားဝေ့.....ဟိဟိဟိဟိ...
paradise on Dec 22, 2009 0
nan myi lar.....nan tal lay...~~~~~~~nose close htar..r..har har...~~~~~~~~nar htuang loh kg ma kg..********:))
နာမည်ပါ ရွှေမင်းသမီးလေးရ.......အသံနားထောင်ရတာကတော့ ရွှေမင်းသမီးလေး ပုံက သီချင်းထဲကလိုမဟုတ်လောက်ပါဘူး...ဟုတ် တယ် ဟုတ်......ဟိဟိဟိဟိ
pp01 on Dec 22, 2009 0
:OOOOOO love it ..love it..:D Seem like..you like this song so much..ngar lae nint ko arr kya thwer pyii..so lot kg mae pone pae.. lite so kyi ohn mal.. :D*******************
သူငယ်ချင်းရေ....ကြိုက်လွန်းလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဟာ.....စာကျက်ရတာခေါင်းပူလွန်းလို့ ခေါင်းနည်းနည်းအေးသွားအောင်ပေါက်ကရလွတ်လွတ်လပ်လပ်လေးတွေပဲအော်ချင်လို့ဟ.......အဲ...မတော်လို့ အဲလို ကောင်မလေးတွေနဲ့တွေ့ရင်တော့နင်ဆီလွှတ်လိုက်မယ်ဟာ.......သင်တန်းပေးလိုက်နော်ကောင်းကောင်းလေး...ဟဟဟဟ
hippo on Dec 22, 2009 0
bro ဒီသီချင်းကို ဟိုတစ်နေ့ကလည်း ဆိုထားသေးတယ် မဟုတ်လား။ ဒါလည်းကောင်းပါတယ်ရှင်။ 5*
အင်း...ဟုတ်တယ်ညီမလေးရယ် ...အဲဒီနေ့ကအမြည်းကျွေးလိုက်တာလေ....ဟိဟိ...အော်......လန်ဒန်ကဆိုတော့အကိုအဲလိုဆိုတာလျှောက်မပြောနဲ့နော်.....အကိုက ဗလ သာကြီးတာ ကြောက်တတ်တယ်......ဟိဟိဟိဟိ...
Moe-Z-lay on Dec 22, 2009 0
နာမည်လေးကို ကြိုက်လို့ မသိသလို ခဏခဏ မေးတာ နေမှာပေါ့ ကိုဗလ....နောက်တစ်ခါလာမေးရင်..ကိုမျိုးဗလပါ.. ချစ်တတ်ကြိုက်တတ်တယ်လို့...လာမစနဲ့လို့....ပြန်ဖြေလိုက်..ဟိဟိ..စတာပါ..မိတယ်မိုက်တယ် ကိုဗလကြီးရေ..*********
ရယ်စရာပြောရအုန်းမယ် အကို့နာမည်ကို မျိူးလို့ပြောရင် ဒီကအဖြူမလေးတွေကဘာကြားလဲဆိုတော့....မြောင်လို့ကြားတယ်...ကြောင်ကသူတို့နားထဲမှာအဲလိုအော်တယ်ဆိုပဲ......ဆိုးပါ့...ဟဟဟဟဟ
achitsonethu on Dec 22, 2009 0
16 yrs tg hote fuu :P 36 tae ahee unckel rapp ka shal kywa kywa ywa ywa ko so twar tar bae !*!*!*!**!*!*!**!*!
ဟာကွာ ခြူးလေးကလည်း....ဦးကဘယ်လိုလုပ်ပြီး ၁၆နှစ်လုပ်လို့ရမှာလဲလို့....သမီးလေးကတော့ဟုတ်တာပေါ့......သမီးလေး မမ တွေထဲမှာကော...ဆံပင်အတိုနဲ့ယောက်ျားလျာပုံတွေပါလားဟင်....ဦးကမြန်မာ ဆန်ဆန်လေးမှကြိုက်တာနော်...သေချာမှာထားလိုက်...ဟိဟိ
turikimuriki on Dec 22, 2009 0
mite mha mite , bro kyi. so nice ! 5*4u.
whitekisslay on Dec 22, 2009 0
Mi tal...mite tal...so twer tar ayann narr htaung lol kaung tal luvlykoko yay************:)male version ne lae tamyo lay listen lol kaung tae...clappp:)
Ilovemusic on Dec 22, 2009 0
mi tel...mite tel...mi tel..mite tel....bravooo...:atb 5*4u byar (မ လုပ်ကြပါနဲ့ ဗျာ...စတားလျော့ပြီးပေးတာ.....အားလုံးဝါသနာတူ မောင်နှမ တွေပဲ ဟာ.....စတားအပြည့်ပေးတော့.....ကိုယ့် အတွက် ဘာထိခိုက်နစ်နာ သွားလို့လည်းဗျာ....ဆိုတဲ့ အသံမပါလို့....ဘာမှ မဗုတ်တာ က နားလည်ပေးလို့ ရတယ်...အခုလို ကြိုးစားပြီး ဆိုနေတဲ့ သူတွေကို...အသိအမှတ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့....5* အပြည့်ပေးကြဖို့...request လုပ်ပါတယ်.....တဖက်သောသူ အတွက် ၀မ်းသာရမယ်.....ကိုယ့်အတွက်လည်း...ဘာမှ အပမ်းမကြီးတာ ကို....ဘာလို့...မလုပ်ကြတာလည်းဗျာ......စိတ်ဓါတ်တွေကို ပြုပြင်စမ်းပါ..။)
ချစ်ကိုကြီးရေ....အားပေးတာကျေးဇူးပါဗျာ.....ဟဲဟဲ...ပြသနာမရှိပါဘူးဗျာ...ကျွန်တော်ကနားလည်ပါတယ်..လူဆိုတာသူ့အခွင့်အရေးနဲ့သူလေ......သူ့ဘောင်ထဲကသူလုပ်တာပဲ....အေးဆေးပါ....ဟဲဟဲဟဲ...ဧကနတော့ အတင်းတုတ်တဲ့ ယောက်ျားလျာ ဗုတ်သွားတာပဲထင်တယ်........ဟားဟားဟားဟား..................
sumaylay on Dec 22, 2009 0
ko myobala gyi yay.........ayin sone comment pay mal byooooooooooooo.............male yaw....female yaw ta yout htae so twar tar ayan good par tal.........really nice one par star twae amyar gyi pay lite par tal ..............*********************************************************
ကျေးဇူးစုမေလေးရေ......နာမည်တော့သိပြီး သားဆိုတော့ မပြောတော့ဘူးနော်...ဟိဟိ...အော်...ညီမလေးက ဆံပင် အတိုလေးနဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီ ၀တ် တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်မဆိုးပါနဲ့ကွယ်.....ဟိဟိဟိဟိ...
Feedback : 65